Tag: qabashada hogaanka | Martech Zone
Tag: qabashada hogaanka
Waxaan cadeyn u nahay in xiisaha tiknolojiyadda suuqgeynta ay sii kordheyso!
Sabtida, Oktoobar 4, 2014 Axad, Oktoobar 5, 2014 Douglas Karr
Dhageystayaashayadu way korayaan. Wax yar maahan sidii loogu talagalay tartiib tartiib tobankii sano ee la soo dhaafay. Way sii kordheysaa bil kasta iyada oo shirkado badan oo badan ay ku adkaadeen go'aannada loo baahan yahay ee la xiriira tiknoolajiyada suuqgeynta. Martech Zone waxay kordhisay inay gaarto ku dhowaad 40% sanadkii sanadkiiba… celcelis ahaan in ka badan 100,000 booqasho bille ah iyo ~ 75,000 macaamiil email ah (hadda waxaan ku jirnaa CircuPress - boosteejada emaylka ee aan u dhisnay WordPress). Our Twitter, Facebook,
Wednesday, September 17, 2014 Talaado, September 16, 2014 Douglas Karr
In kasta oo aan ka caawinno ganacsiyada waaweyn dadaalkooda iibinta iyo suuqgeynta, waxaan nahay ganacsi yar nafteena. Taasi waxay ka dhigan tahay inaan haysanno ilo dhaqaale oo macaamiisha markii ay baxayaan, ay muhiim tahay inaan helno macaamiil kale oo booskooda beddela. Tani waxay awood noo siineysaa inaan nidaamino socodka lacagteena isla markaana aan nalka ku shidanno! Hase yeeshee, waa xaalad adag. Waxaan badiyaa heysanaa hal bil ama labo oo kaliya oo aan ugu diyaar garowno bixitaanka hal macmiil iyo dul saarida